လားရှိုးဗုံးပေါက်ကွဲမှု အခင်းဖြစ်ဝန်းကျင်မှ လူ ၃၀ ခန့်ကိုစစ်ဆေးပြီးသော်လည်း အဓိကကျူးလွန်သူ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁-ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော လားရှိုးမြို့ရိုးမဘဏ် ခွဲဝန်းကျင်ရှိ လူ ၃၀ ခန့်ကို စစ် ဆေးပြီးဖြစ်သော်လည်း အဓိက ကျူးလွန်သူအား ဖမ်းမမိသေး ကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုးမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲ မှူးကျော်နိုင်က “ကျူးလွန်သူကို တော့စုံစမ်း ဆဲပဲ။ မြို့ပေါ်မှာပိတ် ဆို့ရှာဖွေရေးတွေလုပ်နေတယ်။ တည်းခိုခန်းတို့မှာ သတင်းရလို့ဝင် ရှာတာတွေလည်းရှိတယ်။ အမှု နဲ့တော့ အားလုံးပေါင်း လူ ၃၀ လောက်စစ်ဆေးပြီးပြီ။ အဲဒီလူတွေ ကတော့ ဗုံးပေါက်တဲ့ပတ် ၀န်းကျင် မှာ အခင်းဖြစ်ရက်ကစပြီး သူစိမ်း တွေသွားလာတာ ရှိမရှိတွေ့မတွေ့ ကိုစစ်ဆေးခဲ့ တာပါ” ဟု ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၁ ရက်ကပြော သည်။
စစ်ဆေးခဲ့သည့်လူ ၃၀ ဦး မှာ အခင်းဖြစ်ချိန်မြင်ကြားခဲ့ သော သူများဖြစ် သည်ဟု ၎င်းင်းက ပြောသည်။
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရိုးမဘဏ် ခွဲရှိစီစီတီဗွီမှတ်တမ်းများပျက်စီး ခဲ့သော် လည်း နံဘေးရှိ ၊ KBZ Bank စီစီတီဗွီမှတ်တမ်းမှ မသင်္ကာ တရား ခံအမျိုးသားတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိထား ပြီး ၎င်း ကိုဖမ်းမမိသေးကြောင်း ဒုရဲမှူးကျော်နိုင်က ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြို့ မြို့တော်ခန်းမအနီး လမ်းမတော်လမ်းနှင့် ရွှေဘို လမ်း ထောင့်ရှိ ရိုးမဘဏ်ခွဲ(၁)တွင် ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက် ညနေ ၄ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန့်က ပြင်းထန်သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ပွားခဲ့သည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရိုးမ ဘဏ်အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်း တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားပြီး အနီးဝန်း ကျင်ရှိအဆောက် အအုံများလည်း အနည်း ငယ်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း၊ ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရိုးမဘဏ်ခွဲမှ ၀န်ထမ်း မစန္ဒာထွန်း(၄၈)နှင့် မမော် မော်(၃၉)နှစ်တို့ နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ ပြီး အမျိုးသားရှစ်ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၃ ဦးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
ယင်းဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ် သက်ပြီး လားရှိုးမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၆၅/၂၀၁၈၊ရာဇသတ်ကြီးပုဒ် မ-၃၀၂/၃၀၇/၂၈၆/၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် အကြိုဆွေးနွေးနိုင်ရန် တောင်ကိုရီးယားက အဖွဲ့ဝင်ခုနစ်ဦးပါ ကိုယ်စားလ??
မန္တလေး ပိုင်အိုနီးယား စင်တင်တေးဂီတ အခန်းတွင် ဝရိန်တို့ရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စည်တော်ကြီးထားရှိမည့် ညောင်ရမ်းခေတ်ပုံစင်မြင့်ကို ကောင်းမှုတော် ဘုရားရင်ြ??
”အရင်က ရဲတိုက်ပုံစံကို ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ” ရဲတိုက်